Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Ndị bịara IMEX America na-agba ọsọ maka ịdị mma
Na-amụmụ ọnụ ọchị gburugburu na IMEX American ọsọ.
Ike Las Vegas na-enwu site na ndị sonyere na #IMEXrun nke mere n'isi ụtụtụ taa.
Ụfọdụ ndị nwere ume na-aga IMEX America na-anọchite anya mba 27 gara Las Vegas Strip maka ịgba ọsọ ụtụtụ taa.
IMEX America na-aga n'ihu ugbu a na Mandalay Bay na Las Vegas.
Maka ndị na-efunahụ mgbatị ahụ n'isi ụtụtụ, ntụgharị gburugburu ihe omume IMEX America na-egosi n'ala na-agụta dị ka ụkwụ 1k.
Ọ bụ nzukọ zuru ụwa ọnụ nke IMEX America Ndị bịara ya nwere ihe karịrị mmadụ 250 nwere ume sitere na mba 27 gbara ọsọ, gbara ọsọ ma ọ bụ na-aga n'okporo ụzọ mara mma.
Ụfọdụ ndị sonyere #IMEXrun
5k #IMEXrun, nke Voqin mepụtara ma hazie ya ma kwado ya site na simpleview, bụ ohere n'isi ụtụtụ iji "sweatwork" dịka akụkụ nke IMEX America, na-eme ugbu a na Mandalay Bay, Las Vegas, ruo na Nọvemba 11.
Miguel Assis, bụ́ Voqin Partner, na-ekwu, sị: “Ọ dị anyị nile mkpa itinye ego n’ahụ́ ike anyị, ọ bụghị nanị ịnụ ụtọ nnọkọ oriri na ọṅụṅụ na ịṅụ mmanya. Mgbe ahụ, n'ezie, ụlọ ọrụ ahụ dum nwere ike ịdị ike ma dabara adaba iji chee ihe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu. "
Eziokwu na-atọ ụtọ: Ndị bịara IMEX America bụ ndị na-enweghị ike ịbanye n'ọsọ ahụ ka nwere ike ịnụ ụtọ ahụ nke ọma. Ije ije naanị otu ugboro gburugburu IMEX America show floor bụ eze ukwu 1k n'apata.